8 Feebaraayo 2021 kadib maxaa dhici doona? | KEYDMEDIA ONLINE
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa mar kale eed kulal u soo jeediyay Madaxweyne Farmaajo isagoo ku tilmaamay nin dalka duminya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in Farmaajo laga kari la’ayahay inuu maro waadadii Madaxweyne Xasan Shiikh ee dad isku raadinta, si loo helo heshiis doorasho oo loo dhanyahay.
Warsame, wuxuu saadaaliyay in marka waqtiga farmaajo dhamaado laba todobaad kadib ay laba arimood middood dalka ka dhci doonto, kuwaas oo kala aha is isku dhacyo dhex-mara dadka reer Muqdisho iyo Farmaajo ama in beesha caalamka ay fara galin sameyo sidii ka dhacday Kenya 2017
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir wuxuu yiri, “Xilkas maaha cida u durbaan tumaysa doorasho aan la isku raacsanayn. Dhamaadka sanadkii 2007 Kenya xasarad siyaasadeed ayaa ka aloosantahay, dalkuna dagaal ahli ah ayuu qarka u fuulay, haddii aysan beesha caalamku gurmad u fidin lahayn, sababtuna waxay aheyd doorasho la isku diidanaa . Dagaalka maanta Itoobiya ka socdaahi wuxuu daaran yahay muran doorasho la xariira, kaddib markii Gobolka Tigreega ee TPLF ka talin jirtay ay diideen go’aankii ay dawlada Federaalka ah doorashada dib ugu dhigtay, taa bedelkeedana ay kaligood doorasho qabsadeen”.
“Mareykanka oo ah dowladdii dunida ugu tunka waynayd, dimoqoraadiyadana looga daydo, ayaa halis gashay kaddib markii doorashadii lagu murmay. Waxaase badbaadiyey hay’adaha qaangaarka ah ee saldhigtay, kuwaasoo kala sooci kara qof iyo qaynuun, damac shakhsi iyo dan qaran”.
“Dawladii Soomaaliya waxa dumiyey, waa in kala guurkii siyaasadeed la maarayn waayey, oo talo kasta lagu kari waayey qoladii xilligaa xukunka haystay”.
“Haddii doorashada lagu heshiin waayo, dalkuna hay’ado xooggan oo dadka kala saara laheyn, maxay natiijadu noqonaysaa? Yaase dhibkii dhaca masuuliyaddiisa qaadaya”?
“Madaxweynayaashii xilka ka horreeyey Farmaajo goob mudan iyo mid aan mudnaynba waxay u fariisteen sidii doorasho la isla oggolyahay ku dhici lahayd, sababtuna waa in ay masuuliyadooda garteen”’.
“Maanta madaxweyne Farmaajo waxaa laga la’yahay dadka isku keen oo hoggaan muuji. Haddii labada todobaad ee u harsan uu xilkasnimo iyo masuuliyad la iman waayo, labo midkood ayey noqon”.
“1-In beesha caalamka na kala gurto, ama 2- In madaxweyne Farmaajo iyo reer Muqdisho is mutaan, illeyn gobollada kale gacantiisu ma gaartee”.
“Waxaan rajaynayaa in ay tan hore noqoto, oo ay beesha caalamka is mudashada odayga naga badbaadiso”.